[17 / 10 / 2019] Samsun Sivas မီးရထားကိုအမြန်ဆုံးမောင်းနှင်သင့်သည်	55 Samsun
[17 / 10 / 2019] ဘူလ်ဂေးရီးယား၏ Volkswagen စက်ရုံအတွက်မက်လုံး	35 ဘူလ်ဂေးရီးယား
[17 / 10 / 2019] မြန်နှုန်းမြင့်သတင်းကောင်း akkanakkale!	17 Canakkale
[17 / 10 / 2019] ပင်လယ်ကမ္ဘာနှင့် Cable ကား 12 အသက်အရွယ်အထိအခမဲ့	06 တူရကီ
[17 / 10 / 2019] amomamoğlu: 'Haydarpaşaနှင့် Sirkeci ရထားဘူတာများအတွက်တင်ဒါဖျက်သိမ်းပြီး IMM သို့နေရာချထားပါ'	34 အစ္စတန်ဘူလ်
[17 / 10 / 2019] Uadak တွင် Anadolu DMU National Train Set စတင်စမ်းသပ်မောင်းနှင်မှုစတင်ခဲ့သည်	64 Usak
[17 / 10 / 2019] ခရီးဆောင် WC IZBAN Stations	35 Izmir
[16 / 10 / 2019] BTK မှတစ်ဆင့်ဥရောပသို့ရောက်ရှိမည့်ပထမ ဦး ဆုံးကုန်ပစ္စည်းရထားသည် Sivas မှဖြတ်သန်းလိမ့်မည်	58 Sivas
[16 / 10 / 2019] HerePark ယာဉ်မောင်းများကိုဤနေရာတွင်လေ့ကျင့်ထားသည်	41 Kocaeli
[16 / 10 / 2019] ၀ န်ကြီး Turhan: အကန့်အသတ်မဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆောင်ရွက်ပါသည်	06 တူရကီ
Homeတူရကီဗဟို Anatolia ဒေသကြီး06 တူရကီစက်ဘီးအယ်လ် Gel
21 / 09 / 2019 Levent Elmastaş 06 တူရကီ, ဗဟို Anatolia ဒေသကြီး, အထွေထွေ, လမ်းမကြီး, ဘီးစနစ်များ, တူရကီ 0
မြို့တော်တူရကီ, တနင်္ဂနွေစက်တင်ဘာလ 22 အပေါ်ရောင်စုံဖြစ်ရပ်များတစ်ဦးချင်းစီကတခြားကနေအိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပပါလိမ့်မည်အဖြစ်နှစ်ဦးစလုံးအားကစားပြည့်နေပါသည်ရန်။
ဥရောပ Mobility ကိုအပတ်များ၏နယ်ပယ်အတွင်းအားလုံးအားလုံးနိုင်ငံသားများမှပွင့်လင်းပါလိမ့်မည်ဥရောပသမဂ္ဂ၏ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နှင့်အတူပူးပေါင်းဖွဲ့စည်းထားသောနေ့ရက်ကာလကိုတစ်လျှောက်လုံးတူရကီမြို့တော်မြူနီစီပယ်နှင့်လှုပ်ရှားမှုများတွင်တနင်္ဂနွေစက်တင်ဘာလ 22 အပေါ်ကမ္ဘာတဝှမ်းကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
နှေး the Great သမ္မတတူရကီလိမ့်မည်စက်ဘီးခရီးစဉ် START
တူရကီမြို့တော်မြို့တော်ဝန် Mansoor အနှေး, တနင်္ဂနွေစက်တင်ဘာလ 22 15 11.00 နာရီကိုစတင်ဇူလိုင်လ Kizilay ရင်ပြင်မှာအမျိုးသား "ဂရိတ်စက်ဘီးခရီးစဉ်ကိုသင်တူရကီရဲ့ start ၏အဖွင့်ပေးတော်မူမည်တော်မူမည်ပါလိမ့်မယ်။
လူတိုင်း770 ခရီးစဉ်ဖိတ်ကြားသောဆောင်ပုဒ်ဆိုင်ကယ်နှင့်အတူ "အတူတကွလမ်းလျှောက်"; လခြမ်း Mall က, ရှေ့အပေါ် Gazi Mustafa Kemal Boulevard, အ Anatolian ရင်ပြင်, Dögolလမ်း, မာရှယ် Fevzi Cakmak လမ်း, Akdeniz Caddesi, ကာဇက်စတန် Street Journal နှင့် 54 စတင်ပါလိမ့်မည်။ Ashkhabad (Bahçelievler7။ လမ်း) တွင်လမ်းပေါ်ပြီးနောက်လမ်းကိုအဆုံးသတ်ပါလိမ့်မယ်။
အိုင်တီမြို့တော် Arabasi BE မညျ
စက်ဘီးစီးခြင်းအားဖြင့်အသက်တာ၏ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးနှင့်အရည်အသွေးနှင့်မြို့ပြနေရင်းဒေသများ, ကင်ပိန်းကိုကျေးဇူးတင်မြို့တော်ရဲ့လမ်းများဖြည့်ဖို့ကသူတို့ရဲ့အနာဂတ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းအားပေးနိုင်ရန်အတွက်လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ဖြန့်ချိလမ်းလျှောက်ခြင်းနှင့်စက်ဘီးကိုအသုံးပြုနေသူကိုအဝလွန်ခြင်း-တိုက်ခိုက်နေအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဖြန့်ဝေနှင့်ဒေသခံအစိုးရများတိုးတက်အောင်, လူကူးလမ်းကြောင်းတိုးမြှင့်။
တူရကီခုနှစ်တွင်ဥရောပ Mobility ကိုအပတ်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်တနင်္ဂနွေစက်တင်ဘာလ 22 10.00-19.30 နာရီနာရီရောင်စုံလှုပ်ရှားမှုများအပေါ်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားကနေဖြတ်ပြီးဖြစ်ရပ်များအရပျကိုယူပါလိမ့်မယ်။
နာရီ 18.00 Park ကသံအမတ်ကြီးခရစ်ယာန် Berger, သံအမတ်ကြီး, မြို့တော်ဝန်, NGO များအတွက်ဥရောပသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့၏ Tunali Hilmi Caddesi Kuğuluသမ္မတ, လမ်းလျှောက်နိုင်ငံတော်သမ္မတနှင့်နိုင်ငံသားများ၏ပါဝင်မှုနှင့်အတူကျင်းပပါလိမ့်မည်။
19.30 နာရီအစီအစဉ်မှာAnıtparkငါပေးမည်တစ်ဖျော်ဖြေပွဲအနုပညာရှင် Haluk Levent နှင့်အတူအဆုံးသတ်ပါလိမ့်မယ်။ ခွဲဝေယာဉ်ရပ်နားထားနိုင်သည့်၎င်းတို့၏စက်ဘီးနှင့်အတူဖျော်ဖြေပွဲစောင့်ကြည့်ဖို့စက်ဘီးကနေAnıtparkနိုင်ငံသားတွေ။
-10.00-17.00: Street, အဆိုတော်, ယောဂ, အကများနှင့်ရုပ်ရှင်ပြပွဲများ
-17.00-17.30 Nur ရဲဘော်ရဲဘက်ဖျော်ဖြေပွဲ
-18.00-18.30 Tunali Hilmi Caddesi Kugulu ပန်းခြံရိပ်သာလမ်း, ထိုဂျွန်အက်ဖ်ကနေဒီမလုပ်ကြံခံရရဲ့ start မှတက်လမ်းလျှောက်
15 ဇူလိုငျနှစ်ထပ်-အနီရောင်မညျ Crescent NATIONAL စက်ဘီးမစီးရ
-11.00-12.00: 15 ဇူလိုင်လလခြမ်းနီအမျိုးသား Will Kizilay ရင်ပြင် Mall က Gazi Mustafa Kemal Boulevard, အ Anatolian ရင်ပြင်, Dögolလမ်း, မာရှယ် Fevzi Cakmak လမ်း, Akdeniz Caddesi, ကာဇက်စတန် Street Journal နှင့် 54 ၏အရှေ့ဘက်ကနေစတင်။ Ashkhabad မှလမ်းပေါ်ပြီးနောက်လမ်း
-12.00-19.30 Aşkaabatလမ်း (7 ။ လမ်း) မော်တော်ယာဉ်အသွားအလာပိတ်ထားရသည်။ ကခုန်ဖြစ်ရပ်များ, ရုပ်ရှင်ပြ, လမ်းအဆိုတော်များ, စက်ဘီးပြိုင်ကားများနှင့်ယာဉ်မောင်းလေ့ကျင့်ရေး
-19.00-19.30: 54 ။ လမ်းပေါ်ပြီးနောက် Ashkhabad လမ်းမှစတင်ကာနှင့်မြေထဲပင်လယ်Anıtparkအထိလမ်းလျှောက်
19.30: Haluk Levent ဖျော်ဖြေပွဲ
ဥရောပ Mobility ကိုအပတ်ကြောင့်လှုပ်ရှားမှုများတွင်ပါဝင်နိုင်ငံသားများ၏ဓါတ်ပုံတွေကိုယူပြီးဆုအမျိုးမျိုးပေးလိမ့်မယ်။
လူအများစုတစ်ဦးစက်ဘီးပေးထားပါလိမ့်မည်4လူမှုမီဒီယာခွဲဝေမှုနှင့်အပြန်အလှန်ဒေသများပေါ်တွင်ဓာတ်ပုံများစစ်ဆေးပါ။
ငါအစ္စတန်ဘူလ်မိသားစုစက်ဘီးကြိုက်တယ် 07 / 08 / 20184အတွက်အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်, Maltepe ကမ်းခြေက "မိသားစုစက်ဘီး" နိုင်ငံသားများအနေဖြင့်စိတ်ဝင်စားမှုမမြင်စဖူးဧည့်သည်များကမ်းလှမ်းသည့်ဝန်ဆောင်မှုများ။ အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ် Maltepe Orhangazi အားဖြင့်နိုင်ငံသားများအနေဖြင့်အပြည့်အဝအမှတ်အသားများလက်ခံရရှိသောစီးတီးပန်းခြံ "မိသားစုစက်ဘီး" စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ အခက်အခဲလမ်းလျှောက်ရှိသည်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုကိုပိတ်ထားသည်နိုင်ငံသားများနှင့်အတူအတော်လေးစိတ်ကျေနပ်မှုသူအထူးသဖြင့်သက်ကြီးရွယ်အိုများ။ နိုင်ငံသားများကျွန်းမှ ISPARK "မိသားစုစက်ဘီး" ဝန်ဆောင်မှုခြင်းဖြင့်ကောက်ယူသည့်အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်၏အပျြောအပါးကျွန်း VIEW ပဲ့ထိန်းစက်ဘီးလက်အောက်ခံမြင်ကွင်းကိုခံစားရန်ကမ်းခြေခံစားနေကြသည်။ မိသားစုစက်ဘီး,4လူတစ်ဦးသယ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာရှေ့နှင့်နောက်ထိုင်ခုံကို double စွမ်းရည်နှစ်ခု။ ဆိုင်ကယ်နှင့်အတူအငြိမ့်ကမ်းရိုးတန်းအတွက်ကီလိုမီတာထောင်ပေါင်းများစွာ၏ခရီးသွားလာ, သက်ကြီးရွယ်အိုများနှင့်မသန်စွမ်း၌ကျင်လည်ရန်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေ။ စက်ဘီးစီးရန်အတွက် ...
Bursa-Gel အမျိုးအစား Ropeway ရှိပါတယ်ပြန်လည် 21 / 05 / 2004 နှင်းလျှောစီး LIFT အမျိုးအစား-Gel (ပြောင်းပြန် ropeways) ရှိပါတယ်: ဤစနစ်များကိုလေ့ကဝင်ရိုးစွန်းတောင်ပေါ်မှာများနှင့်ကျယ်ပြန့်သောချိုင့်ဖို့ခက်ခဲပြီးအပယ်-လမ်းအခြေအနေများအတွက်အသုံးပြုကြသည်။ STM Bursa nos ကေဘယ်လ်ကားစနစ်၏အမျိုးအစားသံမဏိကြိုးတွေအားဖြင့်ပြီးပြည့်စုံသောတည်းဖြတ်မူပြောင်းလဲသွားပြီနှင့်စနစ်အဖြစ်ကျန်းမာလေ့လာမှုမှလှူဒါန်းခဲ့ထားပြီးလာကြ - အဲဒီမှာနေဖြင့်တင်ဒါခဲ့သည်။ ရင်းမြစ်: stmteleferik
ငါ့ကိုသင်၌ Walking စို့, Metro 16 / 06 / 2012 AK ပါတီ4။ Izmir ဇွန်လထဲမှာတစ်ဦးကလွန်ခဲ့သောတစ်နှစ် "န်ကြီးချုပ် Recep Tayyip အာဒိုဂန်သည်သာမန်ပြည်နယ်ကွန်ဂရက်မှာ4Speaking, ကြှနျုပျတို့သ 35 စီမံကိန်းအတွက်ရှင်းလင်းပြောကြားသည်။ Izmir အတွက်အံ့မခန်းချီတက်ပွဲရှိခဲ့ပါတယ်။ ငါတို့အဘို့အအာမခံပြောကြားခဲ့သည်။ ကျွန်တော်တို့ကိုသည်ဂုဏ်အသရေဖော်ပြခဲ့တဲ့ဖြစ်ပါတယ်ကျနော်တို့ကနောက်ကွယ်မှရပ်တယ်။ Izmir ကျွန်ုပ်တို့ခရီးသွားမြို့လုပ်နေပါတယ်, စီမံကိန်းပြင်ဆင်ထားရန် 2023 အတူအမှတ်တံဆိပ်သို့မြို့တော်ကိုဆောင်ခဲ့ရမည်။ Izmir အတွက်မြို့ပြသစ်များအစားထိုးစိုက်ပျိုး၏စည်းကမ်းချက်များ၌ Karşıyaka အဆိုပါ 808 Örnekköyလူနေအိမ်, စီးပွားရေးစင်တာ၌, အားကစားရုံကျနော်တို့လျှောက်လွှာကိုပြီးစီးခဲ့သည်။380 တထောင်နေရာ Uzundere အတွက်လျှောက်လွှာစတင်အားဖြင့်ပြီးစီးခဲ့ကြသည်။ အခုလေလံလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်, ပြီးစီးခဲ့2တထောင်ကုတင်အလံပြည်နယ်ဆေးရုံစီမံကိန်းသည်။ တစ်ဦးရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ် '' AK ပါတီမြူနီစီပယ်ခြင်းမရှိမြေအောက်ရထားထဲမှာKılıçdaroğlu ...
သုံးနာရီကြာမှအစ္စတန်ဘူလ်နှင့်တူရကီတူရကီ YHT (ဓာတ်ပုံပြခန်း) ဆီသို့ရောက် လာ. , 04 / 03 / 2013 တူရကီအတွက်တူရကီမှအစ္စတန်ဘူလ်သုံးနာရီ YHT ကီလိုမီတာအစ္စတန်ဘူလ်-တူရကီ YHT လိုင်းအတူပါလာ 523 တစ် feverish အလုပ်ရှိပါတယ်။ တူးခံတောင်တန်း, ကဥမင်လိုဏ်ခေါင်းနှင့်အတူဖွင့်လှစ်, ကြီးမားတိုးတက်မှုကို viaducts ။ တူရကီနှင့်တရုတ်အင်ဂျင်နီယာများxnumx'ıncသမ္မတနိုင်ငံ၌ဤဧရာမစီမံကိန်းအားအလုပ်ချိန် 24 ကူးတံတားများမှာအစ္စတန်ဘူလ်-Antalya လမ်း ... ၏နှစ်ပတ်လည်နေ့မွေးမြူဖို့မဖြစ်နိုင်သလောက်အောင်မြင်, လမ်းကြောင်းရှည် viaducts, ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းအောက်ပါအတိုင်း ... သင်ကစီမံကိန်း၏ပထမဦးဆုံးအရွယ်အစားသတိထားမိကြပါဘူး။ သို့သော် 90 ကီလိုမီတာရှည်လျားသောဧရာမဆောက်လုပ်ရေးစီမံကိန်းကိုအပြည့်အဝမြန်နှုန်းမှာရောက်နေပါတယ်။ ဒါကတူရကီအထက်တန်းမြန်နှုန်းရထား (YHT) ဆောက်လုပ်ရေးမှမြို့တော်ချိတ်ဆက်တံ့သောလမ်းကို viaducts ၏လမ်းဆုံ, ပေါ်တောင်များ, မြစ်ကူးသည်ဤစီမံကိန်းအစ္စတန်ဘူလ်ထိုးဖောကျ။ ...
အဘယ်သူမျှမကိစ္စလာကြဟုဆိုသည်အဘယျသို့ Sözcü သတင်းထောက်မြန်ရထား '' ကိုလည်းဒေါင်းလုပ်လုပ်ခဲ့ကြသည် 18 / 12 / 2014 အဘယ်သူမျှမကိစ္စလာကြဟုဆိုသည်အဘယျသို့ Sözcü သတင်းထောက်မြန်ရထားစွပ်စွဲအစာရှောင်ခြင်းရထားကနေဒေါင်းလုပ်လုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု '' သင်ကအသိအမှတ်ပြုရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး '' ကိုလည်း Yavuz Alatas ဒေါင်းလုတ်လုပ်ခဲ့ကြသည်။ Konya-အစ္စတန်ဘူလ်အမြင့်မြန်နှုန်းရထားလိုင်းဟာတူရကီရထားဘူတာမှဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိုစောင့်ကြည့်ဖို့ Sözcü သတင်းစာသတင်းထောက် Yavuz Alatas, 'သူကအသိအမှတ်ပြုမထားဘူး' 'စကားပုံစွပ်စွဲအစာရှောင်ခြင်းရထားကနေဒေါင်းလုပ်လုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ စွပ်စွဲ; အဆိုပါစီမံဆောင်ရွက်သူကို Konya အတွက်အခမ်းအနားနဲ့သူ့ကိုထုတ်ပေးအသိအမှတ်ပြုကဒ်ရထားစီးနင်းထိုဒေသတွင် Alatan ရထားစီးနင်းခဲ့ပါတယ်။ Alatau ပို့ဆောင်ရေးတည်ရှိပြီးဖြစ်သောစာနယ်ဇင်းအခြားအဖွဲ့ဝင်များနှင့်အတူလှည်းနေစဉ်ပြီးနောက်ရေကြောင်းရေးရာနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန, အရာရှိများကရောက်ရှိလာခဲ့ကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ ဤအတောအတွင်း Alatau အတွက်အာဏာပိုင်များ "သင်အသိအမှတ်ပြုမရှိကြပါဘူး။ သင်က ...
18: အောက်တိုဘာလ 10 00 @ - 11: 00
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Beylikova မီးရထားကော်နက်ရှင်လိုင်း၏ဆောက်လုပ်ရေး
18: အောက်တိုဘာလ 14 00 @ - 15: 00
ရထားပို့ဆောင်ရေးနည်းပညာအင်စတီကျု Gebze ၌တည်လိမ့်ရန်
သမိုင်းထဲမှာယနေ့တွင်: ပထမဦးဆုံး Haydarpasa ရထားပီပီမှာစက်တင်ဘာလ 22 1872
Samsun Sivas မီးရထားကိုအမြန်ဆုံးမောင်းနှင်သင့်သည်
Alanya ရှိ Break Interchange အတွက်အစီအစဉ်
ဘူလ်ဂေးရီးယား၏ Volkswagen စက်ရုံအတွက်မက်လုံး
Muğlaရှိ Road Works သည် 2450 Km သို့ရောက်ရှိခဲ့သည်
ပင်လယ်ကမ္ဘာနှင့် Cable ကား 12 အသက်အရွယ်အထိအခမဲ့
RayHaber 17.10.2019 ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတင်းလွှာ
YOLDER စီမံခန့်ခွဲမှု Ankara သွားရောက်ခဲ့သည်
amomamoğlu: 'Haydarpaşaနှင့် Sirkeci ရထားဘူတာများအတွက်တင်ဒါဖျက်သိမ်းပြီး IMM သို့နေရာချထားပါ'
ခရီးဆောင် WC IZBAN Stations
Ilgaz Mountain Ski Centre သည်ရာသီသစ်အတွက်ပြင်ဆင်နေသည်
ISAF သည် 2019 ကိုအလွန်စိတ်ဝင်စားလိမ့်မည်။
BTK မှတစ်ဆင့်ဥရောပသို့ရောက်ရှိမည့်ပထမ ဦး ဆုံးကုန်ပစ္စည်းရထားသည် Sivas မှဖြတ်သန်းလိမ့်မည်
Seçer, Road Traffic Safety Management System ဖွင့်ပွဲသို့တက်ရောက်ခဲ့သည်
ကတ္တရာခင်းခင်းလုပ်ငန်းသည် Bursa Yildirim တွင်ဖြစ်သည်
Bursa-Gel အမျိုးအစား Ropeway ရှိပါတယ်ပြန်လည်
ငါ့ကိုသင်၌ Walking စို့, Metro
သုံးနာရီကြာမှအစ္စတန်ဘူလ်နှင့်တူရကီတူရကီ YHT (ဓာတ်ပုံပြခန်း) ဆီသို့ရောက် လာ. ,
အဘယ်သူမျှမကိစ္စလာကြဟုဆိုသည်အဘယျသို့ Sözcü သတင်းထောက်မြန်ရထား '' ကိုလည်းဒေါင်းလုပ်လုပ်ခဲ့ကြသည်
ယခု Go Konya 3.5 နာရီအတွင်းရောက်ရှိ
သမိုင်းထဲမှာယနေ့တွင်: အောက်တိုဘာလ 15 1939 Ilica-တဲ့ acorn ရထားလမ်းအသွားအလာ ...
သမိုင်းထဲမှာယနေ့တွင်: အောက်တိုဘာလ 14 1941 Uzunköprüနှင့်အတူ Svilingrad ...
သတင်းများ Archive လကိုရွေးချယ်ပါ အောက်တိုဘာလ 2019 (312) စက်တင်ဘာလ 2019 (555) သြဂုတ်လ 2019 (508) ဇူလိုင်လ 2019 (633) ဇွန်လ 2019 (504) မေလ 2019 (526) ဧပြီလ 2019 (418) မတ်လ 2019 (521) ဖေဖော်ဝါရီလ 2019 (483) ဇန်နဝါရီလ 2019 (502) ဒီဇင်ဘာလ 2018 (620) နိုဝင်ဘာလ 2018 (504) အောက်တိုဘာလ 2018 (435) စက်တင်ဘာလ 2018 (517) သြဂုတ်လ 2018 (486) ဇူလိုင်လ 2018 (506) ဇွန်လ 2018 (581) မေလ 2018 (467) ဧပြီလ 2018 (545) မတ်လ 2018 (554) ဖေဖော်ဝါရီလ 2018 (500) ဇန်နဝါရီလ 2018 (557) ဒီဇင်ဘာလ 2017 (509) နိုဝင်ဘာလ 2017 (427) အောက်တိုဘာလ 2017 (538) စက်တင်ဘာလ 2017 (455) သြဂုတ်လ 2017 (505) ဇူလိုင်လ 2017 (479) ဇွန်လ 2017 (477) မေလ 2017 (493) ဧပြီလ 2017 (434) မတ်လ 2017 (540) ဖေဖော်ဝါရီလ 2017 (477) ဇန်နဝါရီလ 2017 (538) ဒီဇင်ဘာလ 2016 (487) နိုဝင်ဘာလ 2016 (631) အောက်တိုဘာလ 2016 (657) စက်တင်ဘာလ 2016 (542) သြဂုတ်လ 2016 (608) ဇူလိုင်လ 2016 (485) ဇွန်လ 2016 (661) မေလ 2016 (664) ဧပြီလ 2016 (700) မတ်လ 2016 (804) ဖေဖော်ဝါရီလ 2016 (855) ဇန်နဝါရီလ 2016 (751) ဒီဇင်ဘာလ 2015 (799) နိုဝင်ဘာလ 2015 (640) အောက်တိုဘာလ 2015 (624) စက်တင်ဘာလ 2015 (428) သြဂုတ်လ 2015 (493) ဇူလိုင်လ 2015 (505) ဇွန်လ 2015 (535) မေလ 2015 (577) ဧပြီလ 2015 (622) မတ်လ 2015 (1017) ဖေဖော်ဝါရီလ 2015 (878) ဇန်နဝါရီလ 2015 (1077) ဒီဇင်ဘာလ 2014 (963) နိုဝင်ဘာလ 2014 (826) အောက်တိုဘာလ 2014 (771) စက်တင်ဘာလ 2014 (598) သြဂုတ်လ 2014 (808) ဇူလိုင်လ 2014 (911) ဇွန်လ 2014 (735) မေလ 2014 (957) ဧပြီလ 2014 (972) မတ်လ 2014 (864) ဖေဖော်ဝါရီလ 2014 (720) ဇန်နဝါရီလ 2014 (733) ဒီဇင်ဘာလ 2013 (664) နိုဝင်ဘာလ 2013 (656) အောက်တိုဘာလ 2013 (548) စက်တင်ဘာလ 2013 (570) သြဂုတ်လ 2013 (533) ဇူလိုင်လ 2013 (661) ဇွန်လ 2013 (577) မေလ 2013 (734) ဧပြီလ 2013 (1059) မတ်လ 2013 (1102) ဖေဖော်ဝါရီလ 2013 (811) ဇန်နဝါရီလ 2013 (906) ဒီဇင်ဘာလ 2012 (911) နိုဝင်ဘာလ 2012 (1168) အောက်တိုဘာလ 2012 (830) စက်တင်ဘာလ 2012 (886) သြဂုတ်လ 2012 (974) ဇူလိုင်လ 2012 (863) ဇွန်လ 2012 (591) မေလ 2012 (445) ဧပြီလ 2012 (563) မတ်လ 2012 (699) ဖေဖော်ဝါရီလ 2012 (546) ဇန်နဝါရီလ 2012 (417) ဒီဇင်ဘာလ 2011 (149) နိုဝင်ဘာလ 2011 (35) အောက်တိုဘာလ 2011 (23) စက်တင်ဘာလ 2011 (18) သြဂုတ်လ 2011 (25) ဇူလိုင်လ 2011 (18) ဇွန်လ 2011 (16) မေလ 2011 (13) ဧပြီလ 2011 (13) မတ်လ 2011 (33) ဖေဖော်ဝါရီလ 2011 (24) ဇန်နဝါရီလ 2011 (13) ဒီဇင်ဘာလ 2010 (335) နိုဝင်ဘာလ 2010 (12) အောက်တိုဘာလ 2010 (15) စက်တင်ဘာလ 2010 (12) သြဂုတ်လ 2010 (16) ဇူလိုင်လ 2010 (9) ဇွန်လ 2010 (19) မေလ 2010 (6) ဧပြီလ 2010 (3) မတ်လ 2010 (62) ဖေဖော်ဝါရီလ 2010 (303) ဇန်နဝါရီလ 2010 (1838) ဒီဇင်ဘာလ 2009 (4) နိုဝင်ဘာလ 2009 (1) အောက်တိုဘာလ 2009 (3) စက်တင်ဘာလ 2009 (3) သြဂုတ်လ 2009 (2) ဇွန်လ 2009 (3) မေလ 2009 (2) ဧပြီလ 2009 (3) မတ်လ 2009 (9) ဖေဖော်ဝါရီလ 2009 (4) ဇန်နဝါရီလ 2009 (3) နိုဝင်ဘာလ 2008 (1) အောက်တိုဘာလ 2008 (1) စက်တင်ဘာလ 2008 (2) သြဂုတ်လ 2008 (1) ဇူလိုင်လ 2008 (2) ဇွန်လ 2008 (2) မေလ 2008 (2) ဧပြီလ 2008 (1) မတ်လ 2008 (3) ဖေဖော်ဝါရီလ 2008 (5) ဇန်နဝါရီလ 2008 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2007 (2) အောက်တိုဘာလ 2007 (2) ဇူလိုင်လ 2007 (1) မေလ 2007 (1) ဧပြီလ 2007 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2007 (2) ဇန်နဝါရီလ 2007 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2006 (1) အောက်တိုဘာလ 2006 (3) သြဂုတ်လ 2006 (1) ဇွန်လ 2006 (2) မေလ 2006 (2) ဧပြီလ 2006 (2) မတ်လ 2006 (2) နိုဝင်ဘာလ 2005 (2) သြဂုတ်လ 2005 (1) ဇွန်လ 2005 (1) မတ်လ 2005 (2) ဖေဖော်ဝါရီလ 2005 (1) ဇန်နဝါရီလ 2005 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2004 (1) အောက်တိုဘာလ 2004 (3) ဇူလိုင်လ 2004 (1) မေလ 2004 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2003 (1) အောက်တိုဘာလ 2003 (1) မေလ 2003 (1) မတ်လ 2003 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2003 (1) ဇန်နဝါရီလ 2003 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2002 (1) အောက်တိုဘာလ 2002 (4) သြဂုတ်လ 2002 (1) ဧပြီလ 2002 (1) မတ်လ 2002 (2) ဇန်နဝါရီလ 2002 (2) ဇူလိုင်လ 2001 (1) ဇွန်လ 2001 (1) မတ်လ 2001 (1) မေလ 2000 (3) မတ်လ 1999 (1) အောက်တိုဘာလ 1998 (2) မတ်လ 1998 (1) သြဂုတ်လ 1997 (1) အောက်တိုဘာလ 1996 (1) သြဂုတ်လ 1996 (2) မေလ 1995 (1) သြဂုတ်လ 1992 (1) မေလ 1990 (1)
Porsche ၏လျှပ်စစ်အားကစားကားမိသားစု၏နောက်ဆုံးအသင်း ၀ င် - Taycan4S
Adapazarıမှ Offroad စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရာရွေ့လျားမှု
တူရကီအပေါ် Volkswagen ကစက်ရုံရွှေ့ဆိုင်းဆုံးဖြတ်ချက်
IETT အမျိုးသမီးယာဉ်မောင်းလျှောက်လွှာနောက်ဆုံးရက်ကိုအောက်တိုဘာ 15 အထိသက်တမ်းတိုးသည်
အမေရိကန် Triple လေယာဉ်ပြေးလမ်း၏အပြင်ဘက်တွင်စစ်ဆင်ရေးပထမဦးစွာအချိန်အစ္စတန်ဘူလ်လေဆိပ်ကမ္ဘာပေါ်မှာဖြစ်ပျက်သွား! "
Gebze Darıcaမြေအောက်ရထားကိုဝန်ကြီးဌာနသို့လွှဲပြောင်းသော်လည်း ...